ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေပန်းခြံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေပန်းခြံ
သငျသညျဥရောပတိုက်တွင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကိုအကောင်းဆုံးနေသော၏သေချာမသိရှိပါက, ထို့နောက်အဘယ်သူမျှမနောက်ထပ်မကွညျ့. ဤဆောင်းပါးသည်ညာဘက်ယခုသင်ဥရောပတိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်တချို့၏စာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! ငါတို့သည်သင်တို့အသီးအသီး၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အားငါပေးမည်နှင့်သင်မည်သို့ရထားသူတို့ကိုရနိုင်. ဒီတော့စာရင်းနှင့်အတူစတင်ပါစေ!
ဥရောပမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးမြို့အပန်းဖြေပန်းခြံ - Disneyland ပဲရစ်
သငျသညျလည်ပတ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျခြောအကြောင်းကိုကြားဖူးတယ် ပဲရစ် Disneyland. အဆိုပါပန်းခြံတဦးတည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မူလ Disneyland အတွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရာအားလုံးပါဝင်သည်. Plus အား, ဒါကြောင့်နှစ်ခုဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံများနှင့် On-site ကိုခုနစျယောဟိုတယ်စုစုပေါင်းပါဝင်သည်! သငျသညျအရာခပ်သိမ်းသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်လျှင်သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိရက်ပေါင်းများစွာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ထို့အပွငျ, သင်သည်လည်းညာဘက်ဘေးနားရှိပန်းခြံမှဖွင့်သောဝေါ့ဒစ္စနေး Studios ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်.
ဘယ်အချိန်မှာကပန်းခြံရောက်ရှိမှကြွလာ, ရထားအဲဒီမှာရောက်ရှိမည်အတော်လေးလွယ်ကူရဲ့. ပြင်သစ်တွင်အများဆုံးဗဟိုမီးရထားအချက်အချာတစ်ခုမှာ Disneyland မှဘေးမှာဖြစ်ပါသည်. ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဗဟို Marne-la-Vallee / Chessy မီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သထံမှလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ပြင်သစ်တွင်ဘယ်နေရာမှာမဆို သို့မဟုတ်ကျော်လွန်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, Disneyland မဟုတ်လည်းဝေးကနေတည်ရှိပြီး ပဲရစ်.
Disneyland Marne-la-Vallee ရထားမှလိုင်ယွန်
ဂျာမနီရှိလူကြိုက်အများဆုံးအပန်းဖြေပန်းခြံ - Europapark
Europapark ဥရောပသားအပေါင်းတို့တွင်အကြီးဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပန်းခြံဖြစ်ပါသည်, ညာဘက် Disneyland ပြီးနောက်. သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ကရှေးခယျြခဲ့ဘာကြောင့်မဖွင့်. ဒါဟာကြောင့် roller-Coaster ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အတွက်ဥရောပအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်၏တဦးတည်းရဲ့. သင်တို့သည်ဤမျှသူတို့ထဲကအတော်များများနှင့်တွေအများကြီးအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့သူမြားကိုစီးရကြလိမ့်မည်. သငျသညျအာသာစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ် – အဖြစ်ကောင်းစွာမှောင်မိုက်စီးနှင့်အတူတစ်ဦးပြင်ပတွင် / မိုးလုံလေလုံတဦးတည်းပေါင်းစပ်ဖွင့်သောနောက်ဆုံးပေါ် roller-Coaster!
သငျသညျသံချေး၌ဤအံ့သြဖွယ်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံရှာတှေ့နိုငျ, Freiburg နီးစပ်သူတစ်ဦးမြို့နှင့် Strasbourg. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရထားမျှမျှတတအလွယ်တကူ Europapark ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်, မည်သည့်မြို့ကနေ. အဆိုပါ ဘူတာရုံ အချို့သော 4km သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဝင်ဝမှလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ဝေးဖြစ်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်များထဲမှယူ ဘတ်စ်ကား သောပန်းခြံကိုသွား.
ရထား Ringsheim မှ Strasbourg
ရထား Ringsheim မှစတုဂတ်
ရထား Ringsheim မှဘေဆယ်
ရထား Ringsheim မှ Offenburg
ဥရောပများ၏ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Capital ကို - Efteling အပန်းဖြေပန်းခြံ
ဥရောပတလွှားအားလုံးထံမှလူအတော်များများအားလုံးအဘို့ဤနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အကြောင်းကိုမသိရပါဘူး ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ချစ်သူများ! သို့သျောလညျး, ပန်းခြံဟာ Benelux အပေါငျးတို့သညျသုံးနိုင်ငံများအတွက်အကြီးမားဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, efteling လူအပေါင်းတို့သည်လူသိများတဲ့ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များအသက်တာလာရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်! Hans Christian Andersen က၏ဂန္ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ထဲကအတော်များများ, ချားလ်စ် Perrault, နှင့်ညီအစ်ကိုများ Grimm ဒီနေရာမှာဘဝထံသို့လာ. သူတို့ကစီးတဲ့ကျယ်ပြန့်ဌန်မှတဆင့် featured နေကြတယ်, Adventures, နှင့်ပိုပြီး. အလုံးစုံ, သငျသညျအရာခပ်သိမ်းသွားရောက်ကြည့်ရှုအနည်းဆုံးနှစ်ရက်လိုပါလိမ့်မယ်!
သငျသညျမျှမျှတတ Efteling သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် အလွယ်တကူရထားမှတဆင့်. ဒါဟာညာဘက်နယ်သာလန်အားလုံးကိုအဓိကမြို့ကြီးများအကြားတွင်တည်ရှိသည်ရဲ့. အဲဒီပန်းခြံစေသည် လက်လှမ်း လူအပေါင်းတို့သည်ကျော်ထံမှ နယ်သာလန် နှင့်ကျော်လွန်. လက်ျာရထားဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုဥရောပမှာနေတဲ့ပန်းခြံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဒါက Efteling ဥရောပအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်များတို့တွင်အဘယ်ကြောင့်အခြားအကြောင်းပြချက်င်!
အလုံးစုံ, ဤသုံးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းကရွေးခြယ်များမှာ. အခွားသူမြားစှာဥရောပမှာရှိပါတယ်, သေချာရဲ့, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သာဤသုံးပါးအမှန်ပင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းခံစားမိ. သင်လုပ်နိုင်သည် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ သူတို့ကိုသင်ဖို့ပန်းခြံများနှင့်ရထားစီးအကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်. လည်း, ကြည့်ယူအခမဲ့ခံစားရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်. ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်များစွာသောနေရာများနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ရကျိုးနပ်ရထားစီးအကြောင်းကိုရေးသားခြင်းနှင့်ဥရောပတလွှားအားလုံးယူပြီးနေကြတယ်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-amusement-parks-europe/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#မင်္ဂလာပါ #efteling #PortAventura #traveleurope eurotrip မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ ခရီးသွား